Nzvimbo Yakagadzikana - Nheyo Yokuwana Kuziva Kwechokwadi
Chinokosha Kubudirira Kuvimbika Kwechokwadi Munzvimbo Yakashata: Agility ndiyo kukwanisa kugadzirisa kushanduka kwemamiriro ezvinhu uye kuita zvinodiwa pakuvandudza zvido. Mune imwe nguva inokurumidza, inooma yakareba, humwe hunokosha hunogadzirisa hunoita kuti kuderedza mari yeprojekiti uye zvigadziriswe zvigadzirwa zvepurojekiti. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekugadzirisa zvirongwa zvekushandiswa kweprojekiti zvakanyanya kugamuchira kuziviswa, kuziviswa uye kuchinja kunoitika pakati pekuitwa.
Zvikamu zvehutano hwakakosha hune simba:
Kupfupika kuronga mahwindo (akawanda anoenderera mberi, mapurogiramu maduku akabatanidzwa pamwe chete muurongwa hunogara kwenguva refu).
Zvinyorwa zvitsvuku (zvakagadziriswa nemahwindo ekugadzirisa maduku uye maoko-pamusoro pekugadzirisa kukuru kunopiwa nehurongwa hwezvirongwa).
Kuwedzerwa kukweretwa kwekambani kunowanikwa (kusungirirwa nemapurojekiti madiki nekutarisira chirongwa).
Kushamwaridzana kwega kwega kunogona kuwedzera kukurumidza asi kusvika pamwero wekuti ivo vachagadzirisa zvakananga munguva pfupi uye nemaune pamusoro pekureba kwenguva refu. Iyo nzira yekutenderera inoda kuswedera nguva yakajeka uye nguva refu yekufungidzira.
Sangano rinoshanduka kuti rive rakaoma kana maitiro anotsigira mapurogiramu anofunga nezvekuwedzera kuongororwa patsva uye kuchinja kwemaitiro ekugadzirisa kweprojekti. Kuwedzerwa agility hakusi kungokonzerwa nekugamuchira zvigadzirwa zviviri zveAgile. Sangano rekuchengetedza chirongwa rinofungidzirwa sechinhu chakajeka pakuti pane izvo zvakanyanyisa kuchinja mamiriro ezvinhu, kubhadhara zvishoma nzira dzinoshandiswa.
Waterfall-style project urongwa hunoita kuti shamwari dzisanyanya kuoma. Kunyanya kufambisa nekutsvakurudza uye zvinyorwa zvinokonzera kugadziriswa kwekusagadzikana kwemigumisiro yakareba mune izvo zvichauya. Kana kubvunzurudzwa kwakazara kwakapedzwa, izvo zvinodiwa zvino zvino zvisingachashandi pakuona kwezvinhu zvakananga uye mararamiro ekuchinja.
Urongwa urongwa hweAgile hutungamiri, hunoita kuti hurumende iwedzere kubudirira kuburikidza nekufambira mberi kwemapurani maduku akaiswa nemaune. Aya mapfupi mapurogiramu anobvumira kuti hutungamiri hwehutachiona hunongororwa. Zvinyorwa zvinochengetedzwa kuti zvive zvakasimba kuti zvigadziriswe zvigadziriswe. Tarisa nepepa zvinyorwa, somuenzaniso, urongwa uye zvishuwo, zvinobudiswa kwekusvitsa kwekupedzisira kwenguva yakareba uye zvinyorwa zvizhinji zvakagadzirwa kwenguva refu. Iko kusanganiswa kunonyanya kushandiswa kwepurogiramu yekutengesa hurongwa huri nani huri kushanda nekugara uchidziridza kudiwa kwevatengi, kusimbisa pano uye ikozvino pasina kubvisa nguva yakareba.
Humwe humwe hunoshamisa huri mukati hunobudirira hwehupi hupi huri kushamwaridzana kana kana pasina kushandiswa kwegadziriro yeAgile programming improvement systems. Utsi hunobva pakuva nekunzwa, kugadziriswa kwehutungamiri hwehupfumi hwehurongwa.
7 Matanho Ekushandisa IWashington Frameworks